Dhageyso;-Wasiir Khadiijo oo shaacisey arrin uga baaqatay Cabsida COVID-19 - Radio Risaala: Somali News Online
Home Maqal & Muuqaal Dhageyso;-Wasiir Khadiijo oo shaacisey arrin uga baaqatay Cabsida COVID-19
Maanta oo kale sannad walba waxaa Magaalada Muqdisho lagu qaban jirey munaasabadaha Maalinta Ciyaaraha Dunnida iyo Nabadda Adduunka iyo Maalinta Ciyaartooyga Soomaaliyeed,loona dabaal-degi jiray orodka gaaban ee Muqdisho Mini Marathon.hayeeshee sanadkaan ay baaqdeen.
Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed diiriye ayaa sheegtay in Munaasabadihii maanta oo kale qorsheysnaa ay u baaqdeen cabsida laga qabo xanuunka COVID-19.
Waxaa ay sheegtay in Ciyaaraha Soomaaliya ay gaareen horumar ballaaran,isla markaana xilli habeen ah,30 sano kadib lagu Ciyaaraha Garoonka Kubbada Cagta ee Banaadir iyo guulo ay sheegtey in Ciyaartoyda Soomaaliyeed kasoo hooyeen dala dibadiisa.
Ciyaartooyda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ayay ugu hambalyeysay munaasabadaha Maalinta Ciyaaraha Dunnida iyo Nabadda Adduunka iyo Maalinta Ciyaartooyga Soomaaliyeed.
Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ayaa horey waxaa ay u joojisey Ciyaaraha ka socdey guud ahaan dalka Soomaaliya sababo la xiriira Cudurka Coronavirus,iyada oo la fasaxey Ajaanibta u Ciyaara Kooxaha Heerka koobaad ee dalka.
Previous articleRa’iisal Wasaare hore oo u geeriyooday Coronavirus
Next articleCiidamada dowladda oo howlgal gaar ah ka fuliyey Beled-Xaawo